FBS ဖြင့်အတူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လွယ်ကူပြီးအကျိုးအမြတ်ပါဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်းအဝယ်အခြေအနေစိတ်ကူးစိတ်သမ်းများ ဖန်းတီးပြီး ဖောက်သည်များအတွက်ပျော်ရွှင်မှုသာမက ၄င်းတို့၏ Forex အကျိုးကျေးဇူးမှားကိုပါ အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိရန် အထူးပရိုမိုးရှင်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ကုန်လွန်ခဲ့သည်။ သင်ဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရသော broker တစ်ခုကိုရှာနေသည်ဆိုပါက သင်နောက်ဆုံးတော့ တစ်ခုတွေ့ရှိသွားပြီဟု သင့်အတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုပေးပါရစေ။
၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသော FBS ဖောက်သည်များသည် အောက်ပါအချက်များကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ထာဝရရှိနေကြသည်။
အဘယ်ကြောင့် FBS ကိုရွေးချယ်သလဲ။
ထိုက်တန်မှု စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသော broker
Forex တွင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော ကမ်းလှမ်းချက်များ
ထောင်ပေါင်းများစွာသော အမြတ်အစွန်းထွက်သည့် အော်ဒါများဖြင့် နေ့စဉ်ပြီးပြည့်စုံနေခြင်း
သန်းပေါင်းများစွာ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သော ဖောက်သည်များ
အရောင်းအဝယ်အတွက် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း
ပုံမှန်ပြိုင်ပွဲများနှင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော ပရိုမိုးရှင်းများ
သိသာထင်ရှားသောမိတ်ဆက်ကော်မရှင် : lot တစ်ခုချင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၈၀ အထိ
FBS သည်အကောင်းဆုံး အရောင်းအဝယ်အခြေအနေများ ထောက်ပံ့ပေးသည်။
အနိမ့်ဆုံး စရံငွေပေးသွင်းမှု ၁ ဒေါ်လာ Spreads ၀ pip မှ အနိမ့်ဆုံးအော်ဒါပမာဏ ၀.၀၁
Leverage ၁:၃၀၀၀ အထိ Split-second execution ပြန်လည်ဈေးခေါ်မှုမရှိခြင်း
FBS လှုပ်ရှားမှုများအား IFSC (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ကော်မရှင်)မှ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ကော်မရှင်၏ တာဝန်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ရောင်းဝယ်သူများ၏ ကာကွယ်မှုနှင့် လုံခြုံရေးအတည်ပြုရန် ထိရောက်သော စီမံခန့်ခွဲမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ IFSCမှ ဈေးကွက် ကျန်းမာရေးနှင့် မြန်ဆန်သော တိုးတက်မှုအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့မှ ဥပဒေပြုနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုဘောင်၏ ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအား စောင့်ကြပ်ပါသည်။ ဤအများပြည်သူ အာဏာသည် စတော့ရှယ်ယာလဲလှယ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုလက်မှတ်များရရှိထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့ အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်. ဖောက်သည်များအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာငွေကြေးဥပဒေများ၏ အကာအကွယ်များကိုရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်. FBSအနေဖြင့်လည်း ဥပဒေများနှင့်အညီလေးစားလိုက်နာကာ ဖောက်သည်များအတွက် အခက်အခဲများနည်းနည်းသမျှနည်းအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှက်ရှိနေပါသည်.